Somali, Romans, Lesson 009 -- The Righteousness of God is Established and Realized in us Through Constant Faith (Romans 1:16-17) | Waters of Life
Home -- Somali -- Romans - 009 (The Righteousness of God)
ROOMA - Cadaadooda Waa Xuquuqda
Daraasadaha kujira Waraaqdii Bawlos ee loogu qoray Rome
FURAHA: Salaan, Allaha U Mahadnaqaa, Iyo Cudurka 'xuquuqda Ilaah' Hada Magaca Ciise Cadawga (Rooma 1:1-17)
c) Xaqnimada Eebbe waxaa ina caddeeyay oo lagu rumeeysan yahay rumaysad joogta ah (Rooma 1:16-17)
17 Waayo, dhexdiisa waxaa laga muujiyaa xaqnimada Ilaah oo rumaysad ka timaada, rumaysadna u socota, sida qoran. sida qoran, ‘’Kii xaq ahu rumaysad buu ku noolaan doonaa’’.
Dhibaato weyn baa ka dhex jirta xagga fiqiga, taas oo ah xaqnimada Ilaah. Haddii diinteennu ahaan lahayd mid rasmi ah, jahwareerka noocaas ah kama soo muuqan lahaa. Si kastaba ha noqotee, markii aan baranay in qoduusnimada Eebbe uu u baahan yahay in dembilaha oo dhan la dilo, iyo in uusan jirin qof xaq ku ah Ilaah hortiisa, waan murugoonnaa, maxaa yeelay aadanaha oo dhami way istaahilaan dhimasho. Weliba Ilaah qudhiisu ma aha oo waa Quduus iyo Xaakin Xaq ah, nafsaddiisa, laakiin waa Aabe naxariis badan, oo uu ka buuxo jacayl, wanaag iyo dulqaad. Isagu ma uu baabi'in lahaa dembiilaha, laakiin wuxuu jeclaan lahaa inuu badbaadiyo.
Quduusnimadiisa darteed, Ilaah uma cafiyi karo kii uu doono iyo goortuu ku farxo, in kastoo uu doonayo inuu cafiyo qof walba si xor ah, maxaa yeelay, weynaanta Ilaah ayaa qeexeysa inuu jiro.
Sidii xal loogu heli lahaa dhibaatadan, wuxuu keenay xaquuqda bedelida allabari, oo dhinta isagoo badal u ah dembiilaha. Maaddaama aysan jirin xayawaan ama wax allabari aadam ah oo buuxinaya shuruudaha quduusnimada Ilaah, wuxuu doortay inuu Wiilkiisa yeesho da 'kasta oo ka horreeya, inuu noqdo nin ku buuxiya nolosha waqtigiisa, inuu ku dhinto booskeenna, kafaaraggudka dembiyadeenna, oo qiil loo caddeeyo anaga. Si kastaba ha noqotee, mawduuca Warqadda ee ku socota dadka Roomanka ma ahan xaqkeenna, laakiin waa xaqnimada Eebbe ee ah: Sidee Quduuska ahu u sii wadaa inuu sii ahaado mid xaq ah, in kasta oo uu xaq ka dhigayo kuwa xaqdarrada ah? Masiixa ayaa ah jawaabta kaliya ee su’aashan.
Dadka sharciga leh ayaa caayaya iskutallaabta dusheeda, iyagoo leh: "Haddii nin walba lagu caddeeyo karo inuu rumeysan yahay Masiixa, de haddaba aan dembaabno intaan sii deyno nimcadda Masiixa la qodbay. iyaga in iimaanka Masiixiyiintu aanu ahayn wax la rumeysan karo, laakiin ay la wada nool yihiin Masiixa, halkaasoo xooggiisu ka shaqeeyo itaal darrkeenna, oo uu midhihiisa ku dhex abuuro. Raacitaanka Ciise wuxuu la mid yahay silsilad xiriirisa xiriiriyeyaashu waa cabirro iimaan leh oo ay ka buuxaan mahadnaq iyo jacayl Masiixa kan kan xaq ka dhigaya, quduus inooga dhigaya, oo inaga dhammaystira. Annagu ma nihin nafteenna badbaadiya, laakiin qalbigeenna ayaan ugu fureynaa nimcada Ilaah. Kuwa xaq lahu waxay ku noolaadaan rumaysad keliya. Waxay ka soo baxaan iimaan xagga rumaysadka, mana isu tixgeliyaan inay iyagu is xaq leeyihiin. Masiixu iyaga waa u caddeeyey, oo wuu sii xajiyaa oo quduus ka dhigaa iyaga maalin kasta, Shuqullada Ruuxiisa. Sidaas oo kale, Ilaah wuxuu sii ahaanayaa inuu ahaado mid xaq ah, maxaa yeelay isagu wuu inaga cafiyaa maalin walba, oo daqiiqad kasta wuu inaga dhigaa. Annagaa leh isaga, oo isagaannu daahirinnay isaga.
Su'aal kale ayaa laga soo saaray dadkii axdigii hore, oo xaqnimada Eebbe hoosta kaga dhigay sumad su'aal. Waa diidmada Yuhuudda ee nimcada. Yuhuuddu waxay iskutallaabta ku qodbeen Wiilka Ilaah, sidaa daraadeed waxay illoobeen taariikhda badbaadadooda. Intaa waxaa dheer, waxay had iyo jeer ka soo horjeedaan codka Ruuxa Quduuska ah oo doonayay inuu iyaga u keeno toobadda iyo iimaanka. Marka la fiiriyo runtaan lama taaban karo, Bawlos iyo rasuulladii kaleba way yaabeen: “Sidee baa Ilaah xaqnimadiisa u sii wadi karaa, hadduu dooran lahaa reerkii Ibraahim, oo uu axdi weligiis ah ugu xidhan? Hase yeeshe, maalmahan waxaan ku aragnaa in Ilaah iyaga adkeeyo oo uu diidayo, maxaa yeelay iyagu ma ay u furan Ruuxiisa Quduuska ah. Ilaah miyuu fashilmay markaa? Quruumuhu waxay u hureen ilaahnimada, quduusnimada iyo xaqnimada Aabaha Rabbigeenna Ciise Masiix.
Ku alla kii rumaysta runta, oo isu dhiiba jihada Ruuxa Quduuska ah, maankiisa ayuu ku cusboonaanayaa, oo wuxuu awoodi karaa inuu ku noolaado quduusnimada dhammaan xaqnimada Axdiga Cusub dhexdiisa. Anshaxa masiixiga ma joojinayo waxbarashadda nin, ama awoodaha aadanaha, laakiin wuxuu kusii adkeynayaa addeecista soo jiidashada jacaylka Ilaah, iyo xoogga badbaadadiisa, oo leh kuwa rumeeysan Wiilka oo dhan. Dhaqanka masiixiyiintu waxay quduus ka dhigayaan magaca Aabaha. Muujinta xaqnimadiisa waa mawduuca warqadda ee loogu talagalay dadka Roomanka
DUCADA: Ilaahow, Trinity Holy, waxaan kuu caabudaynaa maxaa yeelay waxaad noo ogolaatay iimaanka runta ah, oo aad si xaq ah noogu xaq siisay, oo maalin kasta waad na qadarisaa oo aad nagu hanuunisaa. Waxaad tahay Kan Xaqa ah, oo waxaad sii socotaa inaad tahay mid xaq ah, in kastoo aanan fahmin dhaqdhaqaaqyo badan oo dadyow taariikhda adduunka ah. Dhammaanteen na wada qoduusi, oo dembiga naga fogee jilayaashayaga aan noqonno amaan iyo uraad macaan dadka oo dhan.
Sidee xaqnimada Eebbe ula xidhiidhaa caqiidadeena?
Page last modified on February 07, 2021, at 01:55 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)